Anglikana Aho - Anglikana Antananarivo - MG
Ny asan’Andriamanitra dia mikendry ny hiainan’ny zava-boary rehetra ao anatin’ny fitiavana, ny fahamarinana ary ny filaminana – izay voaantso matetika hoe fanjakan’Andriamanitra. Izahay dia miezaka manampy ny tsirairay izay mikatsaka ny fanjakan’Andriamanitra ka miezaka miaina ao anatin’ny finoana Kristiana sy fankatoavana ny Filazantsara.
Laharam-pahamehana ho anay ilay teny manao hoe « Ataovy mpianatro ny olona rehetra » amin’izay rehetra ataonay mba hinoany ny famojena nataon’i Jesoa Kristy ary mba hifototra amin’ny finoana kristiana.
Ny asan’ny fiangonana dia tohin’ny Asan’i Kristy :
Mankalaza ny vaovao Mahafalin’ny fanjakan’Andriamanitra
Mampianatra, manao batisa ary mankahery ny mpino vaovao
Mizara am-pitiavana ho an’ny olona rehetra
Miady ho an’ny hitsaharan’ny tsy rariny, mandà ny herisetra ary miezaka mampanjaka ny filaminana sy ny fihavanana
Miasa ho an’ny fitehirizana ny sadan’ny zava-boary rehetra, manohana sy miezaka miaro ny tontolo iainana
Ny fiangonana Anglikana
Ny fiangonana Anglikana dia fiangonana Katokika nefa tsy katolika romana, dia fiangonana nivoatra nefa tsy « protestant » ihany koa. Ny Anglikana dia mino Andriamanitra tokana mizara amin’ny persona 3 dia Andriamanitra Ray - Jehovah, Andriamanitra Zanaka – Jesoa Kristy ary Andriamanitra Fanahy – Fanahy Masina. Mino ihany koa fa manan-jo ny olombelona hanao izay tiany ary hiaina araka ny lalàny manokana, nefa raha miompana amin’ny fahotana dia hiteraka fisarahana aminy sy Andriamanitra izany. Mino fa niaina Jesoa Kristy ho fitaratry ny toetra maha-Kristiana, maty ho an’ny fahotan’ny zanak’olombelona, ary nitsangana ho fanavotana sy famonjena antsika.
Ny Anglikana dia mandray ny Baiboly ho fototry ny fiainana Kristiana ary mino fa « ao anatin’ny Baiboly no misy ny fanalahidin’ny Famonjena. »
Ny Anglikana dia mino fa ny fiainana Kristiana dia mitaky fiderana sy fivavahana matetika, itambarana sy ho an’ny tsirairay, ka tokony ampiharin’ny Kristiana izay toriany sy ny fivavahany – ny Alahady (Andro atokan’ny Anglikana ivavahana) sy ny andro rehetra mandritry ny herin’andro.
Ny Anglikana dia mino fa ny olona iray dia tafiditra ho mpikambana ao amin’ny fiangonana rehefa vita batisa, ary rehefa kristiana dia tokony handray ny Kominiona Masina (Eokaristia) toy ny sakafo iraisana sy itambarana amin’ny anaran’i Jesoa Kristy.
Ny Anglikana dia manaiky ny foto-pinoana lehibe manambara ny finoana Kristiana : Ny foto-pinoana Apostolika no ampiasaina amin’ny Batisa sy ny fivavahana maraina sy hariva ; ny foto-pinoana Nikeana kosa no ampiasaina mandritra ny Kominiona Masina. Ny fototry ny finoana Anglikana dia voazava amin’ny antsipirihiny ao anatin’ny boky atao hoe « Katekisma » (Teny midika hoe « izay tokony ho ampianarina. »)
Ny toetra mampiavaka ny fiangonana Anglikana
Raha hanontany ny foto-papianarany amin’ny mpino anglikana 3 samihafa ianao, dia hahazo valiny 5 samihafa ! Ny herin’ny fiangonana Anglikana dia ny fifandeferana sy ny fifanekena eo anoloan’ny fahasamihafan’ny fomba fiaina sy fomba fivavahana na eo aza ny ady hevitra eo amin’ny samy mpino mikasika izany.
Na izany aza, ny Anglikana dia manamafy fa ny finoany sy ny fombany ary ny fahefany dia avy amin’ny Soratra Masina (Baiboly), ny fahendrena (Fahalalana ara-tsiansa sy fifandraisana amin’Andriamanitra) ary ny fombam-pivavahana fahiny (finoana sy fomban’ny fiangonana ara-tantara fahizay). Ireo no lazaina fa toko-telo mahamasa-nahandro ny finoana Anglikana raha ampitahaina amin’ny finoana Katolika Romana sy Protestanta.